IQela leVizrt liqesha uDaniel Url ukomeleza ukugxila kwabathengi kuPhuhliso lweMveliso | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » IQela leVizrt liqesha uDaniel Url ukomeleza ukugxila kwabathengi kuPhuhliso lweMveliso
Vizrt Iqela libhengeze namhlanje ukuba uDaniel Url ujoyine inkampani njengeNtloko yoLawulo lweeMveliso zeHlabathi kuMichael Hallén, i-CEO yeQela kunye noMongameli.
Vizrt Iqela ngumbutho ojolise kumxholo ngenjongo ezichaziweyo zokunceda ababalisi behlabathi bahambise amabali amaninzi, axelelwe ngcono. UDaniel wayenguMlawuli oPhetheyo kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso kwiQvest Media ngaphezulu kweminyaka eli-11 ejongene nokuthengiswa kweprojekthi kubandakanya nokufakwa kwe Vizrt iimveliso eSky Sports Munich, ORF Vienna, Nine Network Sydney, kunye nezinye ezininzi.
Ngemvelaphi eyomeleleyo kuphuhliso lwezobuchwephesha kwimveliso, ukuhamba komsebenzi, kunye nentengiso, uDaniel uya kuqinisekisa ukuba iimveliso zeQela; NewTek, Vizrt, kunye ne-NDI®, baya kuzisa kwintengiso ezintsha eziqhubeka nokujolisa kwiziphumo zabathengi. Qvest Media, njengesiqhelo, kuhlala liqabane eliphambili le Vizrt.
UDaniel Url wathi, “Ndiye ndathandwa Vizrt iminyaka emininzi kwaye njengekholwa elinomdla kumandla esoftware, i-IP, kunye netekhnoloji yefu yokutshintsha indlela umhlaba owabelana ngayo ngamabali ayo abe ngcono. Ayikho enye indawo ebhetele endinokuhlala kuyo. ”
I-Url kunye namaqela oLawulo lweMveliso aza kusebenza ngokusondeleyo nemisebenzi ye-R & D ekhokelwa nguGqirha Andrew Cross, uMongameli weR & D ye Vizrt Iqela, elenza amandla okuphuhliswa kwemveliso yeQela. Ngokudityaniswa, esi sibini siya kukhulisa ukugxila ekuhambiseni ixabiso labathengi ngokwenza izinto ezintsha kwimveliso nakwinqanaba lamava ukuze iQela liqhubeke nokugxila kwimpumelelo yabathengi.
UMichael Hallén, i-CEO yeQela kunye noMongameli wathi, “Kuyandivuyisa ukuba nakho ukuzisa amava kaDaniel kunye namandla akhe Vizrt Iqela losapho. Sinezicwangciso ezininzi ezonwabisayo ngekamva kwaye siqinisa umsebenzi wethu wophuhliso lweemveliso ngendlela eya kuthi isincede sisebenzele abathengi bethu, kwaye umxholo wabo ngcono ungumbindi woku. ”
Amava kaDaniel agxile kubathengi kunye nokuqonda kuya kudibanisa Vizrt Ukunikezelwa kweqela kwisizukulwana esilandelayo sezixhobo ezichaziweyo zokubalisa amabali ezingasanyanzelwanga sisixhobo sehardware, esenza ukuba abathengi bakwazi ukubalisa amabali abo, ngcono.
Previous: Imifanekiso yePace yongeza uMbono ogqityiweyo kuMariah Carey's "Gcina uSuku"
next: Ukukhanya kwe-Iron kwandise izisombululo ezitsha zokusebenzisana okude